Abakhiqizi nabaphakeli be-Silicon Camera - Abakhiqizi be-China Abakhiqizi be-China Abakhiqizi be-fiberglass
Indwangu yeSilicon Camera fiberglass
Indwangu yeCarbon Fibre
Indwangu ye-PTFE fiberglass
Polyurethane Camera fiberglass Indwangu
Aluminium Ucwecwe fiberglass Indwangu
Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass
Indwangu ye-Silicone Fiberglass
Indwangu emnyama ye-fiberglass
0.4mm Silicon Camera fiberglass Indwangu
Izinga Lokushisa Eliphezulu le-fiberglass Cloth
Indwangu ye-Blue Carbon Fibre
I-4 × 4 Twill Carbon Fibre
1k Carbon Fibre Indwangu
Indwangu ye-Carbon Fibre ye-Unidirectional
Indwangu Yengilazi Ye-Ptfe
Indwangu ye-Teflon fiberglass
Ptfe Camera Glass Indwangu
Acrylic Camera fiberglass
Indwangu ye-Acrylic Fiberglass
Indwangu emnyama ye-fiberglass iyindwangu ye-fiberglass, enezici zokumelana nokushisa, i-anti-corrosion, amandla amakhulu futhi ifakwe irabha le-organic silicone.
Indwangu ye-0.4mm Silicon Camera fiberglass yakhiwe kusuka kwindwangu yesisekelo se-fiberglass futhi yafakwa noma yafakwa uhlangothi olulodwa noma izinhlangothi zombili ngenjoloba eyakhiwe ngokukhethekile ye-silicone. Ngenxa ye-silicone yerabha yomzimba, ayikhulisi nje kuphela amandla, ukufudumeza okushisayo, izinto ezingangeni umlilo, izakhiwo zokuvikela, kepha futhi inokumelana ne-ozone, ukuguga komoya-mpilo, ukuguga okukhanyayo, ukuguga kwesimo sezulu, ukumelana nowoyela nezinye izinto
Izinga Lokushisa Eliphezulu le-Fiberglass Indwangu iyindwangu ye-fiberglass, enezici zokumelana namazinga okushisa, anti-corrosion, amandla aphezulu futhi ifakwe irabha le-organic silicone. Kungumkhiqizo osanda kwenziwa onezakhiwo eziphezulu nezinhlelo zokusebenza eziningi. Ngenxa yokumelana kwayo okuyingqayizivele futhi okuhle kakhulu emazingeni okushisa aphezulu, ukungena nokuguga, ngaphezu kokuqina kwayo, le ndwangu ye-fiberglass isetshenziswa kakhulu e-aerospace, embonini yamakhemikhali, enkulu ikhiqiza imishini kagesi, imishini, insimbi, insimbi yokunwetshwa okungalingani (isinxephezelo ) njll.
Indwangu ye-fiberglass Iyathengiswa
Indwangu ye-fiberglass iyathengiswa yenziwa ngendwangu yesisekelo se-fiberglass kanye nekhwalithi ephezulu ekhethekile yokumboza abicah.Ukushisa okusebenzayo: -70 ℃ --- 280 ℃ .Ingasetshenziswa njengezinto zokufaka ugesi. Isinxephezeli esingeyensimbi singasetshenziswa njengesixhumi se-tubing futhi singasetshenziswa kabanzi emkhakheni we-petroleum, ubunjiniyela bamakhemikhali, usimende nezinsimu zamandla. Ingasetshenziswa njengezinto zokulwa nokugqwala, izinto zokupakisha nokunye.
Indwangu ye-Plain Wave Fiberglass
Indwangu ye-Plain Wave fiberglass yenziwe ngendwangu yesisekelo se-fiberglass nekhwalithi ephezulu yokumboza abicah.Ukushisa okusebenzayo: -70 ℃ --- 280 ℃ .Ingasetshenziswa njengezinto zokufaka ugesi. Isinxephezeli esingeyensimbi singasetshenziswa njengesixhumi se-tubing futhi singasetshenziswa kabanzi emkhakheni we-petroleum, ubunjiniyela bamakhemikhali, usimende nezinsimu zamandla. Ingasetshenziswa njengezinto zokulwa nokugqwala, izinto zokupakisha nokunye.
Indwangu ye-Fiberglass enemibala
Indwangu ye-fiberglass enemibala yenziwe ngendwangu yesisekelo se-fiberglass nekhwalithi ephezulu ekhethekile yokumboza abicah.Amazinga okushisa asebenzayo: -70 ℃ --- 280 ℃ .Ingasetshenziswa njengezinto zokufaka ugesi. Isinxephezeli esingeyensimbi singasetshenziswa njengesixhumi se-tubing futhi singasetshenziswa kabanzi emkhakheni we-petroleum, ubunjiniyela bamakhemikhali, usimende nezinsimu zamandla. Ingasetshenziswa njengezinto zokulwa nokugqwala, izinto zokupakisha nokunye.
Abahlinzeki Bendwangu Ye-fiberglass
Abaphakeli Bendwangu Ye-fiberglass benziwe ngendwangu yesisekelo se-fiberglass nekhwalithi ephezulu yokumboza abicah.Ukushisa okusebenzayo: -70 ℃ --- 280 ℃ .Ingasetshenziswa njengezinto zokufaka ugesi. Isinxephezeli esingeyensimbi singasetshenziswa njengesixhumi se-tubing futhi singasetshenziswa kabanzi emkhakheni we-petroleum, ubunjiniyela bamakhemikhali, usimende nezinsimu zamandla. Ingasetshenziswa njengezinto zokulwa nokugqwala, izinto zokupakisha nokunye.
Izingubo ze-fiberglass zokuvimbela amanzi zenziwe ngendwangu yesisekelo se-fiberglass nekhwalithi ephezulu yokumboza abicah.Ukushisa okusebenzayo: -70 ℃ - 280 ℃ .Ingasetshenziswa njengezinto zokufaka ugesi. Isinxephezeli esingeyensimbi singasetshenziswa njengesixhumi se-tubing futhi singasetshenziswa kabanzi emkhakheni we-petroleum, ubunjiniyela bamakhemikhali, usimende nezinsimu zamandla. Ingasetshenziswa njengezinto zokulwa nokugqwala, izinto zokupakisha nokunye.
Ingilazi Fibre Indwangu Yokuvimbela Ukungena Ngamanzi
Ingilazi ye-Fiber Indwangu Yokuvimbela Ukungena emanzini yenziwa ngendwangu yesisekelo se-fiberglass nekhwalithi ephezulu ekhethekile yokumboza abicah.Ukushisa okusebenzayo: -70 ℃ - 280 ℃ .Ingasetshenziswa njengezinto zokufaka ugesi. Isinxephezeli esingeyensimbi singasetshenziswa njengesixhumi se-tubing futhi singasetshenziswa kabanzi emkhakheni we-petroleum, ubunjiniyela bamakhemikhali, usimende nezinsimu zamandla. Ingasetshenziswa njengezinto zokulwa nokugqwala, izinto zokupakisha nokunye.
123 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/3
Oxhumana naye kusuka ku-
Cha. 8 Tianxiu ST Tiedong RD Beichen DT Tianjin China
Iselula / Wechat: +86 18622623855
Isingeniso nezindwangu zekhabhoni
Imikhiqizo emisha yendwangu ye-Teflon fiberglass
Tianjin Cheng Yang Zezıhlabane Imikhiqizo Silico ...
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. Amathiphu - Hot Products - Ibalazwe
Indwangu i-fiberglass, Acrylic Camera fiberglass, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass,